Waxaa inta badan waa marka aan u qoraan daqiiqado naga qaali ah ku jira fiidiyo qaab HD. Inta badan videos ah in aan inta badan u qoraan ma taageersana by qalabka aan u isticmaalno si ay u ciyaaro ama software ah in aan u isticmaalno in our PC ama Mac. Halkan, diinta ka ciyaari karaan qayb ka mid wanaagsan. Files fiidiyo guud ahaan waa qaab MTS. Diinta .mts badan files leh "gacan-jabis" halka software furan waa ikhtiyaar fiican si loo qabto. Laakiin maalmihii la soo dhaafay, Wondershare Video Converter Ultimate waa tartan weyn ee hore mid ka mid ah. Sida aan waayo-aragnimo, VCU Wondershare cad ku laayeen in garaaca gacan-jabis.
The "gacan-jabis" software waa mid lacag la'aan ah. Hadaba, waxa u bedeli karaan oo keliya files MTS galay MP4 ama MKV qaabab sida software free. Laakiin waxaad u baahan doontaa in ku dhow goobaha video oo aan shaki ku jirin waa qayb ka mid ah ka adag yihiin in diinta ah. Tallaabada ugu horreysa ee dhinaca diinta aad files MTS waa inaad kala soo baxdo software this lacag la'aan ah. Ka dib markii in, raac tallaabooyinka hoose si ay u bilaabaan qaab beddelidda.
Sida loo badalo MTS Videos la gacan-jabis
Talaabada 1: Marka aad abuurtaan Converter ee "gacan-jabis", waxaad arki doontaa daaqad oo wuxuu kuu sheegi doonaa in ay soo dhoofsadaan faylasha aad rabto in aad si loogu badalo. Qofka u bedeli karaan oo keliya mid ka mid file dumaya (haddii aad doonayso in aad qabato beddelaad Dufcaddii, mana jirto talaabo kale ah si gacan-jabis oo aan ka dib ka wada hadli doona oo ku saabsan). Marka uu furmo suuqa dhoofinta muujinaysaa ilaa, guji "Source" button ee dhankiisii ​​bidix iyo interface ah si aad u furto. Waxa kale oo jira ah "Browse" doorasho waxaa si aad u furo files aad ka kombiyuutarka.
Talaabada 2: Tallaabada labaad waa in ay doortaan folder caga ee files gediyay. Dooro drive ah oo aad rabto in aad isticmaasho si ay u kaydiso.
Talaabada 3: Next, u timid inaad dhexe ee interface aad ka shaqeeya. Hubi "goobaha Output". Dooro hadii aad rabto in aad MP4 ama MKV file format. Mid ka mid ah sidoo kale ka bedel kartaa bitrate, framerate fursadaha, encoder iyo in ka badan. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel goobaha video ah, riix badhanka hoose ee interface wax soo saarka. Wixii sawiro, waxaa sidoo kale waa tab sax ah oo aad riixi kartaa oo iyaga ka bedel.
Talaabada 4: Waxaa la joogaa waqtigii guji "Start" ee geeska bidix ee kore ee bogga si ay u bilaabaan diinta. Files More lagu dari kartaa adigoo gujinaya ah "Add to safka" button. Mar kasta, waxaad u baahan doontaa in ay maraan habka la mid ah.
Gacan-jabis waa software u wanaagsan isagoo xor ah iyo bixinta dhaaf dheeraad ah laakiin waxaa jira qaar ka mid ah la dhaafi karin aasaasiga ah software this. Tusaale ahaan, aadan u bedeli karaan faylasha aad si ka badan laba qaabab; aadan sameyn karin diinta Dufcaddii ah, oo aan aad u bedeli karaan DVDs copyright ilaaliyo ama DVD aad oo macmal ah arrintan. Sidaa daraaddeed ayaa dadku waxa ay raadinayaan xal kale. Wondershare Video Converter Ultimate noqon kartaa doorasho weyn oo fog ka xoogbadan badan gacan-jabis. Waxaa badasha DVDs, oo macmal ah videos iyo kuwa kale si raaxo leh. Converter wuxuu taageeraa tiro balaadhan oo ah filetypes taasoo u fududaynaysa si loogu badalo in ay filetype kasta halkii ay yareysey qaab beddelidda in ay laba. Xawaaraha ee Converter, Taasuna waa wax lagu faani karo sida ka dhabayso mar 30X ka dhaqso badan mid ka mid ah converters in ay magaalada ku jiraan.
Waxay u eg tahay riyo isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate. All inaad samayso waa in la furo files ilaa DVD ama faylasha kale ee aad computer iyada oo "Add" button ama "DVD Load" button. Xitaa Waxaad ka furan kartaa ilaa files .iso aad. Next, waxaad dooran kartaa qaabab wax soo saarka ka filetypes heli karo. Waxaa jira qaabab badan oo software this taageertaa. Waxaad si fudud u leeyihiin in ay doortaan mid aad jeceshahay u dhexeeya a tirada noocyada file wax soo saarka oo aan ka werwerayn oo ku saabsan goobaha. Markaas kaliya dooro hagaha wax soo saarka iyo weeraray badalo. Mid ka mid had iyo jeer si toos ah wareejin karaan videos ka PC in qalabka la fiilooyinka USB ama xitaa iyaga oo aan via Bluetooth la xawaaraha weyn ka Wondershare Video Converter Ultimate.
Vs. gacan-jabis Wondershare Video Converter Ultimate - A Healthy Isbarbar:
Qaar ka mid ah dhihi lahaa gacan-jabis waxaa ku raran yihiin muuqaalada iyagoo software free. Laakiin ha na si daacad ah oo sheegaya in ay jiraan meelo yar halkaas oo Handbreak dhaco gaaban. Markaas waxaa jira meelo gaar ah, halkaas oo Wondershare Video Converter Ultimate ku guuleystay dagaalka ku jira. Tagno barbar si aad u aragto mid ka sii wanaagsan tahay oo kale ama mid ka mid ah taas oo ah meesha ugu sareysa marka ay timaado diinta videos.
Badalidda files Dufcaddii
Conversion File Noocyada qaab kasta oo .mp4 iyo .mkv
Speed ​​Conversion 30X dhaqso caadiga ah
Gubasho in DVDs
Anigu ma geli faahfaahinta farsamada ee labada software ah. Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya laba ma lahan habka aad eego. Waxaan soo bandhigay farqiga u eego fudud oo qof kasta si ay u fahmaan iyo dooran ugu fiican ee mid ka mid ah shaqada. Iyadoo "gacan-jabis" waa software aad u fiican shaqooyinka qaab beddelidda, waxaa jira arrimo dheeraad ah oo yar oo Wondershare Video Converter Ultimate siin laayeen.
> Resource > Video > Sida loo rogo ama MTS Faylal ay la gacan-jabis